Ny mpanjifa mailaka Spark dia nohavaozina hanararaotra izay vaovao ao amin'ny macOS Mojave Avy amin'ny mac aho
Ny mpanjifa mailaka Spark dia navaozina hanararaotra izay vaovao ao amin'ny macOS Mojave
Ignacio Sala | | Mac App Store, Programa Mac
Afaka ora vitsivitsy dia hamoaka amin'ny fomba ofisialy i Apple ary ho an'ny rehetra, ny kinova farany an'ny macOS Mojave, ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasan'i Apple ho an'ny solosaina Mac. Tsy toy ny kinova taloha, ity fanontana vaovao ity dia tsy mifanaraka amin'ny Mac rehetra navoaka talohan'ny 2012, ka mety ho olana ho an'ireo mpampiasa te hankafy ny kinova farany an'ny macOS.
Ny androm-piainan'ny Macs nitombo be tao anatin'ny taona vitsivitsyNa dia mazava ho azy aza, Apple dia tsy maintsy manomboka mametra ny isan'ny fitaovana mifanaraka amin'ity kinova ity mba hampirisihana ny fanavaozana. Raha raisina ny sasany amin'ireo solosaina afaka mankafy macOS High Sierra miaraka amin'ny 9 taona eny an-tsena, dia tsy azo hamarinina ny hetsiky ny Apple.
Eo am-piandrasana ny famoahan'i Apple ny fanavaozana ny kinova farany an'ny macOS Mojave, araka ny nolazain'ny mpiara-miasa amiko Javier, dia efa nanomboka namoaka ireo fanavaozam-baovao ho an'ny mpandrindra sasany araraoty ny vaovao avy amin'ny tanan'ny kinova macOS vaovao, ankoatry ny fisorohana ny olana mifanentana.
Inona no vaovao ao amin'ny Spark version 2.0.13
Ny mpanjifa mailaka Spark dia miombona amin'ireo serivisy fiantsoana kaonferansa fampiasa indrindra toa ny Google Hangouts, Google Meet, Zoom ary GoToMeeting hahafahantsika manampy rohy fihaonambe amin'ireo hetsika nefa tsy mila miala amin'ilay fampiharana.
Fanohanana ny maody maizina vaovao, iray amin'ireo zava-baovao ateraky ny macOS Mojave.
Ny fizarana preferences dia nohavaozina, mba ho mora kokoa ny mahita ireo safidy fanamboarana ilaintsika.
Ireo tovolahy avy any Spark, mazava ho azy, nanararaotra nanitsy ny sasany tamin'ireo olana natolotry ny fampiharana tamin'ny fanavaozana teo aloha, zavatra iray izay tsy isalasalana fa ankasitrahana.
Azo alefa maimaimpoana ny Spark ary safidy tsara indrindra handefasana mailaka io, raha toa ka tsy mahatratra ny filantsika ny mpanjifa mailaka macOS. Ho fanampin'izay, manana ny kinova ho an'ny iOS koa izy, noho izany, hampifanarahina amin'ny fitaovana roa foana ny kaontinay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Ny mpanjifa mailaka Spark dia navaozina hanararaotra izay vaovao ao amin'ny macOS Mojave
Ahoana ny fametrahana fampiharana antoko fahatelo amin'ny macOS Mojave
Apple dia mitady vahaolana hafa mankany London Battersea noho ny fahataran'ny fanamboarana